Indlela yokubuyisela ijeketi ye denim?
Ijeketi ye jeans yinto efanelekileyo kufuneka ibe nantombazana. Le nto injalo yonke into yokuba ayiyi kuphuma kwimoya. Kodwa iminyaka ihamba, kwaye into eyayiyithandwe yinto yokuqala iqala ukuzala. Unokwenza, ngokuqinisekileyo, uyinike udade wakho / umntakwabo ... Kodwa kungcono ukulungisa! Ngaloo ndlela, sibulala iintaka ezimbini ngelitye elinye: sigcina le nto ngembali kwaye siyifumane inguqulo yayo. Nangona ukuthunga kungekhona ihashe lakho, ndikunika iindlela ezimbalwa ezilula zokuphucula.
Ukubuyisela ijeyethi ye-denim ayinzima njengoko kubonakala. Into ephambili kukuba ukwazi umlinganiselo, ukuze loo nto ibonakale isitayela, ingabonakali. Kulula kakhulu ukuwela lo mgca onqabileyo.
Inketho elula kukuba ukuhlobisa umveliso ogqityiweyo , ingakumbi ngaphandle kokutshintsha nantoni na. Oku kunokwenziwa ngoncedo lwezinto zokuzonwabisa ezikhoyo. Yaye ubunzima bolu msebenzi buya kuhlangabezana nayo nayiphi na intombazana eyaziwayo indlela yokugcina inaliti ezandleni zakhe.
i jean jacket
izikhonto zetsimbi okanye iipikiti,
amaqhosha aqabileyo kunye nezinto.
Thatha ibhatyi kwaye uyihlobise ngemigqa okanye ubuhlalu, kunye nolu njongo, i-sequins efanelekileyo. Umsebenzi unzima, kodwa ufanelekile. Ngokuqhelekileyo ukuhlobisa kugqityiweyo kwikhola okanye kwiikhebhu. Kodwa awukwazi ukuma apha kwaye uyihombise i-coquette emva okanye uyibuyisele ngokupheleleyo. Sikucebisa ukuba udwebe umzobo ngepeni kwangaphambili ukwenzela ukuba yonke into iphendule kakuhle.
Ukuba awukho umthandi wobuqili, yenza ipakethi ye-punk-style, kuba yinto engaphezulu. Ukwenza oku, udinga izikhwele zetsimbi okanye iipikhi, ezinokufumaneka lula kwisitolo sokuthunga rhoqo. Ezi nkcukacha zinamathele emagxeni, zixelisa "iintambo zomxholongwane", okanye kwi-collar.
Ngoxa uncedo lwentsimbi, unako ukunika ijacket umthunzi wothando. Kwanele nje ukuwugubungela phantsi kwelo nto, kunye neengxowa. Kufuneka wenze oku kusuka kwicala elingafanelekanga, ukuze i-lace iqokelele ngaphandle kwe-jeans enobudaka.
Ukuba into yakho ekhompyutheni, ungaziguqula ukuba ukhanyise okanye uyibambe kwi-collar kunye neepokotshi (fumana izinto zesitayela se-hippy).
Ijekethi inokuguqulwa ngentyatyambo, eyenziwe kwintsimbi. Ingaba ngathi i-jeans enzima, ivakalelwa, i-guipure elula, i-satin okanye i-chiffon.
Nika ijacket yakho "i-scrapes" ezintle. Oku luncedo kwi-metal grater. Ukuba ufuna ukufumana iincinci kunye nechanekileyo "imida yexesha", sebenzisa i-blade.
2. Senza ijeketi ye-denim efake imodeli enefuthe lokuthotywa .
Ngalo njongo i-bleach yasekhaya eyaneleyo (njenge "Whiteness").
Siphakamisa i-bleach kwi-pelvis.
Siphonsa into apho, kodwa ingagqibekanga, malunga nesiqingatha.
Shiya ibhatyi ngeyure nesiqingatha kwesi sixazululo.
Siphuma, sihlambulule. Yenziwe!
Ngenye indlela, unokuba ungcolise ubumhlophe kwisibhamu sokutshiza, uze uphefe ijeyethi. Abanye basebenzisa ibrashi ukupenda olu lwakhiwo. Uvavanyo!
Okanye unokuthi uthenge ipeyinti ekhethekileyo yamacwecwe uze upende ibhatyi lakho kumbala omtsha ongaqhelekanga.
3. Siyakhela kwijekethi isitya se- denim .
Le waxcoat ngoku iphupha lamantombazana amaninzi. Kwaye ngamanye amaxesha ubiza ngaphezu kwebhokisi. Ukugcina uhlahlo lwabiwo-mali kwaye udale into yomlobi, yenza ngokwakho. Ewe, kwi-jacket efanayo.
Ngoko, ngaphandle kwengubo esiya kuyidinga:
iisisi (i-manicure engcono),
inaliti kunye nentambo.
Mva kancinci imikhono. Endaweni yeekisi, ungasebenzisa i-razor blade.
Ikhola ingasala, kodwa ingasuswa (kuxhomekeke kumzekelo oyiphi na umtya oceba ukuyenza).
Sisebenzisa iintonga ze-armholes nge-braid braid. Ngenxa yale njongo, inwele yokufakelwa nayo ifanelekile.
4. Yenza i- bolero yangempela .
Siphuma ibhanti yenyundo evela ngaphantsi.
Emva koko mfutshane nomveliso ngokwomnqweno wakho uze ubonce ibhande kwindawo.
Sithatha i-bolero, eyenziwe ngokwemiyalelo engentla. Sifaka kumgca wezantsi we-eyelet (oku kunokwenziwa kuyo nayiphi na ukulungiswa kwesihlangu nge penki okanye kufakwe ngokuzimela ngokupopu okhethekileyo).
Sidlula emingxondeni isithsaba esisiqhayisa samasi okanye i-lace, siyayibopha. Ikhwele elikhanyayo liya kwenza. Ubuhle!
Xa ukhethe ukhetho lweempahla, iimveliso ze-denim ziya kuhlala zifestile kwaye ziya kukuvumela ukuba utshintshe umfanekiso ngalunye usuku. Kwaye ukuba unamathele zakho izandla kunye nokucinga, izinto ezinjalo ziza kunika kwisihlwele kwaye zingenise "intsikelelo" leyo intombazana ayifunayo.
Indlela yokwenza iimpahla ngokufanelekileyo
Indlela yokuhlobisa itheyibhile yonyaka omtsha ngomnyaka weHlabathi
Inyaniso yonke malunga nomonakalo we-sausage ebilisiwe: I-Mendeleev's Table kwi-bread pin
Isisombululo esihle sokubanda
Ukubethelela imithetho yetiyi eluhlaza
Ukuba abamelwane bephula umthetho woluntu
Imiba ebalulekileyo ngonyaka we-Tiger
I-Pilaf eneengulube kwi-multivariate
I-Krismesi: Ukuvumisa iKrismesi ekuhlambeni
Imidwebo yezingane ezintle kunye ezilula ngoMeyi 9 kwipensile kunye ne-watercolor. Imiyalelo ngeNyathelo-ngeNyathelo
I-Horoscope yowesifazane-intlanzi ngo-Juni 2017
Isondo emva kokubeletha
Imisebenzi yasekuqaleni ye-Day of Astronautics ngezandla zabo - ukusuka kwi-pasta, iibhotile zeplastiki, iphepha-esikolweni kunye ne-kindergarten - Iingcamango zemisebenzi yezandla ukuya kwiSuku se-Astronautics ezinezifundo eziphambili
Umvangeli wasemazweni alala ngesondo
Ngaba abantu bathanda intombazana?
Ukuhlobisa okubumba kwegumbi labantwana
Iimbangela zeengxaki ze-hormone kubasetyhini
Ngaba intsapho ecebileyo iya kuthatha umkhwekazi ohluphekileyo?
I-Pasta ene-shrimps newayini